20 dareenka in iibso A isticmaalay iPhone
Doonayo in ay soo iibsadaan iPhone ah loo isticmaalo waa in uu ka muuqadaa dhowr wax loo qabto iyo SAAMEYN. Ka sokow in aad si fiican u cilmibaarisyadii ku saabsan iPhone la doonayo ee version, kuwaas oo tricks iyo talooyin kaa caawin in aad afku ugu fiican.
1. Raadi qiimaha ugu wanaagsan ee aad doonayso inaad iPhone ee version
Waxaa jira websites badan ka halkaas oo aad ka iibsan kartaa iPhone isticmaalay. Si taxadir leh u akhri dhammaan faahfaahinta ay bixiyaan iibiyaha, xataa guaranty bixiyeen. Qof walba oo cimrigayaga aan sameeyo baaritaan online kala duwan iyo in dacwooyinka qaarkood qiimaha ugu wanaagsan ee ma aha qasab ugu sarreeya.
2. Read ku saabsan siyaasadda ee laabtay
Waxaa laga yaabaa in qalabka helay ma aha sida waxa lagu tilmaamay by iibiyaha. Hubi in aad u soo celin kartaa oo eega kii bixinta dhalmada.
3. Hubi xaaladda used iPhone
Websites mudan weydii in ay ku iibinaya si cad u sheegid xaaladda iPhone loo isticmaalo. Waxa ay noqon kartaa in xaalad fiican, lakiin ka sokow qalab si fiican u raadinaya, ayaa sidoo kale u shaqeeya waa in ay ku taaganyihiin wanaagsan.
4. Fiiri haddii badhamada caadiga ah si fiican u shaqaynayaan
Sida aad ka eegi kartaa badhamada kuwanu? Just riix badhamada guriga iyo awood laba jeer. Hubi in ka iPhone jawaabaha loo isticmaalo si fiican.
5. Hubi xiriir Wi-Fi ah ee la isticmaalay iPhone
Waxaa hubaal ah in ay jiri doonaan xaaladaha marka aad rabto in aad isticmaasho a xiriir Wi-Fi. Oo sidaas waa tijaabin la xidhiidha awoodda Wi-Fi oo ay u xira dhowr mitir ka halakeeyeen ee dhexdhexaad ah oo joogto ah.
6. Guddi iPhone
Hubi iPhone loo isticmaalo la shaqeeya bixiyaha adeegyada telefoonka. Iyadoo Munaasabaddan waxaad arki doontaa live haddii qalabka uu xiran yahay ama aan.
7. Samee call a
Gacantaada Just saaray iPhone oo ay ka dhigi call a si loo arko haddii aad si fiican u maqlaan. Dabcan, waxa kale oo aad ku arki doonaa haddii aad makarafoonka si fiican u shaqaynayo iyo qofka kuu yeedhay maqlo.
8. Hubi dareenka screen taabto:
Haa, touchscreen uu u muuqdo waayeen cabsi badan, laakiin sidoo kale hubi in ay dareen. Si fiican u jawaabaya on tallaabo ama waa in aad ka jaftaa dhowr jeer?
9. feature kaltan uh
Hubi haddii qalab aad ka shaqaynayso si fiican xitaa aad isku shaandheyn iPhone, kor, hoos.
10. Eeg haddii ay jiraan wax pixels dhintay
Sida aad ka arki kartaa haddii ay jiraan pixels dhintay? Simple! Just dami iPhone, ka dibna waxaa mar kale u noqon on. Waxaa jiri doona a Apple logo cad. Haddii aad aragto pixel kasta oo midab kala duwan, ka badan waa loo hubiyo in quruxsan in ay yihiin pixels dhintay.
11. Test kaamarooyinka iPhone ee
Sure, aad rabto in aad immortalize waqtiyo qurux ee noloshaada. Sidaas, tijaabin camera hore iyo kamaradaha dib muuqaalada dhowr ah ayaa sidoo kale sida iftiinka flash ah.
12. Check duubista codka
Fur app diiwaangelinta cod iyo record. Haddii gacanta cas ka dibna u dhaqaaqo waxa ay ku jirtaa taagan wanaagsan.
Nolosha 13. Battery ee used iPhone
Wixii iPhone ah, sida caadiga ah muddo nolosha batari waa 10 - 12 saacadood. Si kastaba ha ahaatee waxa ay leedahay tiro kooban oo wareegyada xoqdo. Haddii iPhone la isticmaalo in ka badan 1 sano, batariga waa in la bedelay.
14. Check magdhow dareere on used iPhone
Iyadoo ku xiran iPhone ee version, hubi saxaarad SIM ah, Jack headphone ama isku xira 30-pin midab casaan ah, taasoo muujinaysa in xiriir dareeraha.
15. Hubinta Raadi My status iPhone
In kasta oo ka mid ah habkaani wanaagsan, haddii ay Raadi My iPhone waxaa gagadin, aadan sameyn karin dhow wax iPhone loo isticmaalo. Weydii milkiilaha inay dami ka hor si ay u kuu soo diraan.
16. Check lahaanshaheeda
Isticmaal Apple ee xaaladda shaqeyn Lock qalab la IMEI qalabka ama lambarka taxan. si uu u hubiyo xaaladda, laakiin tani waa in aanay noqon arrin - haddii iibiyaha waa sharci, isagu ama iyadu waxay yeelan doonaan dhibaato ah ma dhiibteen ka macluumaadkan.
17. Weydii haddii ay jiraan waxaa weeye wax heshiis ah side
In badan oo xaaladood, ka dib markii uu heshiis la side ayaa soo afjaray, iPhone aan la dambe qufulan. Si kastaba ha ahaatee waa inaad weydiisaa iibiyaha haddii kiiska uu yahay.
18. Weydii haddii damaanad ah ayaa la isticmaalay
Hubi haddii hor iPhone loo isticmaalo waxaa loo dayac tiray, waxaa cusboonaysiiyey iyo haddii ay haa tahay, halkaas oo falalka la sameeyey.
19. Weydii haddii kiis loo isticmaalay
IPhone kasta oo uu leeyahay qaar ka mid ah kiis gaar ah qalabka si ay u badbaadiyaan ka magdhaw shil ah. Haddii iibiyaha dacwad, ay u badan tahay waxa uu si wanaagsan u isticmaali.
20. Weydii sababta loo iibin
Sababaha waxay noqon kartaa caruureed, sida iibiyaha ma jeclaan feature yar. Si kastaba ha ahaatee itis wax fiican in aad weydiiso sababta uu iibinaysa iyo mke fikradaada u gaar ah oo arrintan ku saabsan.
Sida loo Cad Autofill on iPhone
Sida loo Delete History on iPhone
Sidee loo nadiifiyaa tuuryo Broken in Windows
> Resource > masixi > 20 dareenka in iibso isticmaalay iPhone ah